Mampihena tena araka ny sokajin-drà
Parution du Lundi, 25 Janvier 2021
Araka ny nambaranny mpitsabo iray antsoina hoe Dr Peter DAdamo dia misy
karazan-tsakafo manokana sahaza ny sokajin-drà tsirairay. Tsara ho fantatra indrindra izany, raha te-hampihena tena. Nandrafitra ny sakafo mety sy ireo tokony hofadiana izy, miankina amin’ny sokajin-drà. Ireto avy izany :
Raha maniry hampihena tena ny olona manana ity sokajin-drà ity dia ireto avy no tokony hofadiana : ny vokatra vita amin’ny ronono, ny kobam-barim-bazaha, ny katsaka, ny voasary, ny voatabia, ny baranjely, ny ovy, ny « lentilles » ary ny tsaramaso maina. Sakafo be proteina kosa no tokony homen’izy ireo vahana, toy ny hena mena sy ny trondro.
Tokony hihinana legioma betsaka ny olona manana ity sokajin-drà ity, raha te hihena haingana. Mety aminy tsara koa ny voamaina. Tokony hofadiany kosa ny hena mena, ny ovy, ny saonjo, ny laisoa, ny voatabia ary ny voasary.
Tokony hiovaova kosa ny sakafon’ny olona manana ity sokajin-drà ity. Ity vondrona ity irery no afaka ny mihinana vokatra vita amin’ny ronono matetika sy voasary. Tokony hofadiany kosa ny akoho, ny varim-bazaha ary ny katsaka.
Afaka misakafo miovaova koa ny olona manana ity sokajin-drà AB ity, fa ny tena tokony homeny vahana dia ny henan’ondry, ny henam-bitro ary ny henam-borontsiloza. Tokony tsy hihinana akoho sy voasary kosa izy ireo.
Sôkôla, fraomazy, dite
mandamina ny tosi-drà midina
Vitsy kokoa ireo olona no manana tosi-drà midina, raha oharina aminireo manana tosi-drà miakatra.
Akondro manta : Mampitony aretim-po
Arakaraky ny fomba hikarakarana ny akondro manta ny vokatsoa entiny aminny fahasalamana.
Inona no fitsaboana ny tosi-drà miakatra?
Azo lazaina ho misy tosi-dra ny olona iray rehefa hita fa miakatra mandritra ny fotoana maharitra io tosi-dra io.
Firy volana aorianny fiterahana no afaka mitoe-jaza indray ?
Fanontaniana mety hipetraka aminireo reny rehetra ny hoe aorianny fiterahana, rahoviana vao afaka mitoe-jaza indray ? Ireto ny valinizany.
Manga manta : Mampahia, manasitrana vavony
Fotoana fahavokaranny manga izao. Mitondra vokatsoa ho anny fahasalamana
Mitazona ny vitamina aminny legioma andrahoina
Miankina aminny fomba handrahoana ny sakafo ny hitazonanity farany ny otrikaina entiny.
© 2020 Copyright: Jejoo